Sanders oo Clinton kaga adkaaday West Virginia - BBC Somali
Sanders oo Clinton kaga adkaaday West Virginia
Image caption Hillary Clinton iyo Bernie Sanders
Bernie Sanders ayaa waxa uu isreebreebka doorashada Mareykanka ee gobolka West Virginia kaga adkaaday haweenayda horkacaysa tartanka Xisbiga Dimuqraadiga, ee Hillary Clinton.
Senator-ka ayaa weli waxa uu daba socdaa Hillary Clinton oo hogaaminaysa tartanka, hasayeeshee guushan waxa ay niyad siinaysaa rajada aan badnayn ee uu leeyahay.
Hadal uu jeediyay guusha kaddib, ayuu Sanders ku celiyay sida uu ugu adkaysanayo inuu yahay qofka ugu wanaagsan ee ka hor istaagi kara musharaxa Xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, inuu noqdo madaxweynaha dalka.
Mrs Clinton ayaa weli ku horreysa hoggaanka tartanka Xisbiga Dimuqraadiga, hasayeeshee dadka qaadaa dhiga arrimaha Mareykanka ayaa sheegaya in Mr Sanders uu helayo awood uu ku saameeyo siyaasadda xisbiga ee codbixinta bisha Nofeembar.
Mr Trump ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay codbixinta gobollada West Virginia iyo Nebraska.
Kooxihii ugu dambeeyay ee la loolamayay ayaa waxa ay tartanka isaga hareen todobaadkii la soo dhaafay hasayeeshee weli waxa ay ku qoran yihiin warqadaha codbixinta.
Hasayeeshee Mr Trump ayaa waxaa horyaal shaqo adag maadaama uu isku dayayo inuu helo taageerada Xisbiga Jamhuuriga, xilli ay sii kordhayso shaki laga qabo qaabka maamulkiisa.
Afhayeenka Aqalka Odayaasha, Paul Ryan, oo ah sarkaalka ugu sarreeya xisbiga ee haya jago loo tartamay, ayaa sheegay in uusan ayidi karin ganacsadahan ka soo jeeda magaalada New York maadaama uusan ku socon mabaadii’da muxaafidka.